Perché dovremmo pregare per il "nostro pane quotidiano"? | PREGHIERA&NEWS
Gịnị mere anyị kwesịrị iji na-ekpe ekpere maka “nri ụbọchị anyị”?
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 27, 2020 Ọgọstụ 27, 2020
“Nye anyi nri taa nke ubochi” (Matiu 6:11).
Ekpere bụ ma eleghị anya ngwá ọrụ kachasị ike Chineke nyeworo anyị iji jupụta n’ụwa a. Ọ na-anụ ekpere anyị ma nwee ike ịza ha n’ụzọ ọrụ ebube, dịka uche Ya si dị. Ọ na-akasi anyị obi ma na-anọnyere ndị obi ha tiwara etiwa. Chineke nọnyeere anyị n’ime ọnọdụ dị egwu nke ndụ anyị na kwa oge dị egwu kwa ụbọchị. Ihe banyere anyị na-emetụ ya n’obi. Ọ na-ebute anyị ụzọ.
Mgbe anyị n’ekpere Onye-nwe-anyị ụbọchị niile, anyị amatabeghị oke mkpa anyị ga -achọ ịnwụ ruo ọgwụgwụ. "Achịcha ụbọchị" abụghị naanị site na nri na ihe ndị ọzọ. Ọ na-agwa anyị ka anyị ghara ichegbu onwe anyị maka ụbọchị ndị na-abịa, n'ihi na "kwa ụbọchị na-eburu oke nchegbu." Chineke n’ikwesi ntụkwasị obi na-ejupụta n’akpa nwa nke mkpụrụ obi anyị kwa ụbọchị.
Gịnị bụ Ekpere Onyenwe Anyị?
Okwu a ma ama, “nye anyị nri ụbọchị anyị,” bụ akụkụ nke Nna Anyị, ma ọ bụ Ekpere Onyenwe Anyị, nke Jizọs kụziri n’oge Ozizi Elu Ugwu ya a ma ama. RC Sproul dere "arịrịọ nke Ekpere Onyenwe Anyị na-akụziri anyị ka anyị jiri mmụọ nke ịdị umeala n'obi bịakwute Chineke, na-arịọ ya ka o nye anyị ihe dị anyị mkpa ma kwado anyị kwa ụbọchị". Jizọs nọ na-eche ihu n’omume na ọnwụnwa dị iche iche ndị na-eso ụzọ ya chere ihu ma nye ha ihe nlereanya ha ga-ekpe n’ekpere. "A na-akpọkarị 'Ekpere Onyenwe Anyị', ọ bụ n'ezie 'Ekpere Ndị Na-eso'zọ', ebe ọ bụ na e bu n'uche ka ọ bụrụ ihe nlereanya nye ha," ka NIV Study Bible na-akọwa.
Achịcha dị mkpa n’ọdịnala ndị Juu. Ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs gwara okwu banyere Ozizi Elu Ugwu chetara akụkọ banyere iduzi ndị nna nna ha n’ala ịkpa na otú Chineke si nye ha mana iji rie kwa ụbọchị. “Ekpere maka nri bụ otu n'ime ekpere a na-anụkarị n'oge ochie,” ka NIV Cultural Backgrounds Study Bible na-akọwa. “A pụrụ ịtụkwasị Chineke obi, onye nyeworo ndị ya nri ụbọchị iri anọ n’ọzara maka nri”. Ihe mere ugbu a mere ka okwukwe ha sikwuo ike site n’icheta ndokwa ndị Chineke mere n’oge gara aga.
Gịnị bụ "nri ụbọchị anyị"?
Jehova we si Moses, M'g willme ka nri si n'elu-igwe zoro unu dika miri. Ndi mmadu ga apu kwa ubochi nchikota ihe ruru ubochi ahu. N’ụzọ dị otú a, m ga-anwale ha ma hụ ma ha ga-agbaso ntụziaka m ”(Ọpụpụ 16: 4).
Dị ka Akwụkwọ Nsọ si kọwaa ya, nsụgharị Grik nke achịcha pụtara achịcha ma ọ bụ nri ọ bụla. Otú ọ dị, mkpọrọgwụ nke okwu ochie a pụtara “ibuli elu, ibuli elu; buru n'onwe gị ma buru ihe a zụlitere, wepụ ihe a kpọlitere, wepụ ". Jizọs na-ezigara ndị mmadụ ozi a, nke ga-ejikọ achịcha na agụụ na-agụ ha ugbu a, yana maka nri nna nna ha nyere n'ofe ọzara site na mana nke Chineke na-enye ha kwa ụbọchị.
Jizọs nọ na-arụtụ aka n’ibu ndị ọ ga-ebu kwa ụbọchị dịka Onye Nzọpụta anyị. Site n'ịnwụ n'obe, Jizọs buuru ibu niile kwa ụbọchị anyị ga-ebu. Mmehie niile nke gaara arapara anyị ma mee ka anyị sie ike, ihe mgbu na ahụhụ niile dị n’ụwa - Ọ bụ ya wetara ya.
Anyị maara na anyị nwere ihe anyị kwesịrị ịnyagharị kwa ụbọchị ka anyị na-eje ije n'ike na amara ya. Ọ bụghị maka ihe anyị na-eme, nwere ma ọ bụ nwere ike mezuo, kama maka mmeri nke ọnwụ Jizọs emeriworị maka anyị n'obe! Christ ekesiwak ndit i in n ke us u understand n oro mme owo ekemede ndifiok ony u te n okopde. Oge ka anyi n’eji n’Akwukwo Nso, o kariri ka Okwesiri ntukwasi obi na ikpughere oyi akwa nke ihunanya jikoro n’otu uche obula Okwuru na n’ime oru ebube O rubeworo. Okwu Chineke dị ndụ gwara ìgwè mmadụ okwu n’ụzọ anyị ka na-achịkọta site taa.
“Chineke nwekwara ike ịgọzi unu n'ụba, ka ihe niile wee na-eju unu afọ n'ihe niile n'oge niile, ka ụnụ nwee ọtụtụ ihe ọma,” (2 Ndị Kọrịnt 9: 8)
Ntụkwasị obi anyị na Kraist anaghị ebido ma kwụsị site na mkpa anụ ahụ maka nri. Ọbụna dịka agụụ na enweghị ebe obibi na-aga n'ihu na-emebi ụwa anyị a, ọtụtụ ndị oge a anaghị enwe ụkọ nri ma ọ bụ ebe obibi. Nkwenye anyị na Kraịst gbara ume site na mkpa anyị nwere maka Ya igbo mkpa anyị niile. Nchegbu, ụjọ, esemokwu, ekworo, ọrịa, ọnwụ, ọdịnihu a na - enweghị atụ - ruo n'ókè nke anyị enweghị ike mejupụta kalenda nke izu - ha niile dabere na nkwụsi ike gị.
Mgbe anyị na-ekpe ekpere ka Chineke nye anyị nri ụbọchị anyị, anyị na-arịọ ya ka o gbooro anyị mkpa anyị niile. Mkpa anụ ahụ, ee, mana amamihe, ike, nkasi obi na agbamume. Mgbe ụfọdụ Chineke na-egbo mkpa anyị maka ịbụ onye a mara ikpe maka omume mbibi, ma ọ bụ chetara anyị ịgbatị amara na mgbaghara maka ụjọ iwe na obi anyị.
“Chineke ga-egbo mkpa anyị taa. Amara ya dị maka taa. Anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị banyere ọdịnihu, ma ọ bụ banyere echi, n'ihi na ụbọchị ọ bụla nwere nsogbu ya, ”ka Vaneetha Rendall Risner na-ede, n'ihi na anyị chọrọ Chineke. Ọ bụ ezie na ọ gaghị esiri ụfọdụ ike igbo mkpa anụ ahụ nke nri na-edozi ahụ kwa ụbọchị, ndị ọzọ na-arịa ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ.
Giveswa na-enye anyị ọtụtụ ihe kwa ụbọchị na-echegbu onwe anyị. Mana ọbụlagodi mgbe o yiri ka ụwa aghara na egwu na-achị ụwa, Chineke na-achị. Ọ dịghị ihe na-eme n'anya ya ma ọ bụ ọbụbụeze ya.
Gini mere anyi ji agha rue mgbe anyi ga-eji obi umeala jua Chineke ka o nye anyi nri ubochi?
“Abụ m achịcha na-enye ndụ. Onye ọ bụla bịakwutere m agụụ agaghị agụ ya. Onye ọ bụla nke kwere na m, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ọzọ ”(Jọn 6:35).
Jizọs kwere nkwa na ya agaghị ahapụ anyị. Ọ bụ mmiri dị ndụ na achịcha nke ndụ. Obi umeala n’ikpegara Chineke ekpere maka ihe anyị na-enweta kwa ụbọchị na-echetara anyị onye Chukwu bụ na onye anyị bụ dịka ụmụ Ya. Inabata amara nke Kraist na-echetara anyi kwa ubochi ịdabere na ya maka mkpa anyi nke ubochi. Obu site na Kraist ka anyi ji agakwuru Chineke n’ekpere. John Piper na-akọwa, sị: "Jizọs bịara n'ụwa iji gbanwee ọchịchọ gị ka ọ bụrụ isi ihe ị chọrọ." Atụmatụ Chineke mere ka anyị ịdabere n’ebe ọ nọ kwa ụbọchị na-akwalite mmụọ nke ịdị umeala n’obi.
Isoro Kraịst bụ nhọrọ nke ụbọchị iji bulie obe anyị ma dabere na Ya maka ihe anyị chọrọ. Pọl dere, sị: “Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla, kama n’ ọnọdụ ọ bụla, jirinụ ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike, were ekele keleenụ Chineke ihe ị na - arịọ ”(Ndị Filipaị 4: 6). Ọ bụ site n’aka Ya ka anyị na-anata ike karịrị nke mmadụ na amamihe iji nagide ụbọchị ndị siri ike, na obi ume ala na afọ ojuju ịnabata ụbọchị izu ike. N'ime ihe niile, anyị na-achọ iwetara Chineke otuto dị ka anyị na-ebi ndu anyị n'ịhụnanya Kraịst.
Nna anyị maara ihe anyị kwesịrị iji ịnyagharị na-agagharị kwa ụbọchị. N’agbanyeghi oge n’abia nke ubochi anyi, nnwere onwe anyi nwere n’ime Kraist enweghi ike maa jijiji ma o bu wepu ya. Pita dere, sị: "Ike Ya nke dị nsọ enyewo anyị ihe niile anyị chọrọ maka ndụ Chukwu site na nghọta anyị banyere onye kpọrọ anyị maka ebube na ịdị mma ya" (2 Pita 1: 3). Kwa ụbọchị, ọ na-enye anyị amara n’elu amara. Anyị chọrọ nri ụbọchị anyị kwa ụbọchị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis weghachiri ndị na - ege ntị n'ozuzu ha
Next Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa mara ma ị nwere ike ịhụ obi Jizọs na ndụ gị